Ny vavahady Brandenburg | Vaovao momba ny dia
Ny vavahady Brandenburg
Maria | | Berlin, tanàna
Ny iray amin'ireo sary masina ao Berlin dia ny vavahady Brandenburg malaza, mariky ny fandresen'ny fandriam-pahalemana amin'ny fiadiana sy ny vavahady taloha mankamin'ny tanàna. Izy io dia natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-17 nandritra ny nanjakan'i Frederick William II avy any Prussia, izay nandidy ny fananganana varavarana XNUMX hafa koa izay nanome fidirana amin'ny afovoan'i Berlin, io no lehibe indrindra tamin'ny seta.
Androany dia iray amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra ary misy sary any Alemana. Miaraka aminy, Berliners dia mivory mba hankalaza hetsika lehibe sy hetsika lehibe ary koa mpizahatany tsy tambo isaina haka sary be indrindra amin'ny diany tany amin'ny renivohitra Alemanina. Ity no ilainao ho fantatra momba ny vavahady Brandenburg, ny marika malaza indrindra any Alemana.
1 Ny niandohan'ny vavahady Brandenburg
2 Mampiavaka ny vavahady Brandenburg
3 Fandravana ny vavahady Brandenburg
4 Toerana misy ny vavahady Brandenburg
Ny niandohan'ny vavahady Brandenburg
Izy io dia natsangan'ny mpanao mari-trano Carl Gotthard Langhans teo anelanelan'ny 1788 sy 1791, izay nanome azy endrika mampahatsiahy ireo andohalambon'ny Romanina mandresy lehibe. Amin'izao fotoana izao dia ny Neoclassicism no fomba fanao zavakanto ary ny Prussia dia te hampiseho ny heriny amin'i Eropa rehetra miaraka amin'ity tsangambato ity.
Raha ny marina, ny vavahady Brandenburg dia mariky ny fandresena ary teo ambanin'ny tohany dia nolalovan'ny sangany tao an-tanàna tamin'ny naha mpikambana azy tamin'ny mpanjaka, tafika ary matso.
Mampiavaka ny vavahady Brandenburg
Amin'ilay sarotra be dia be, miavaka ny hahavony, 26 metatra, ary ny sary sokitra 5 metatra avo izay manome satroboninahitra ny varavarana maneho ny kalesin-tsoavaly notarihin'ireo soavaly efatra ary notarihin'ilay andriamanibavin'i Victory nitaingina Berlin.
Ity sary sokitra noforonin'ilay mpanakanto Johann Gottfried Schadow ity dia nahagaga an'i Napoleon Bonaparte rehefa niditra tao Berlin izy tamin'ny 1806, ka nanapa-kevitra ny hitondra izany ho amboaran'ny ady tany Paris izy. Saingy, rehefa nianjera tamin'ny fahasoavana ny amperora frantsay tamin'ny 1814, niverina tany Berlin ilay sary sokitra.
Ny sarivongana izay azo zahana ankehitriny eo amin'ny vavahady Brandenburg dia kopia iray natao tany West Berlin tamin'ny 1969, satria potika ny Ady Lehibe Faharoa nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Fandravana ny vavahady Brandenburg
Ny fipoahan'ny Ady lehibe faharoa dia niteraka fahasimbana lehibe tamin'ny firafitra sy ny sary sokitra an'ny vavahady Brandenburg. Taty aoriana, tamin'ny 1956, ny hery fibodoana dia niara-niasa tamin'ny fanarenana azy, fa tamin'ny fotoana nananganana ny rindrin'i Berlin tamin'ny 1961, dia nijanona tao amin'ny tanin'olon-tokana ilay tsangambato., voafandrika eo anelanelan'ny andrefana sy ny atsinanana ka zara raha misy manana izany.
Tamin'ny 1989, dia tafaraka indray i Alemana Atsinanana sy Andrefana. Fikambanan'ny mpiasa iray hita tao amin'ity vavahady goavambe ity, izay very asa nandritra ny taona nisarahan'ny rindrin'i Berlin malaza. Taorian'ny fampiraisana ny tanàna, ny vavahady Brandenburg dia nahazo ny toerana sahaza azy tamin'ny tantaran'i Berlin.
Toerana misy ny vavahady Brandenburg
Hatramin'ny 1814, ny toerana misy ny vavahady Brandenburg dia fantatra amin'ny anarana hoe Viereck (ny kianja) fa taorian'ny fianjeran'ny tafika Napoleonika dia natao hoe Pariser Platz (Paris Square) no anarany. Io no kianja lehibe indrindra any Berlin ary ny tafika mpandresy an'i Alemà dia namaky azy io, nanomboka tamin'ny Hohenzollerns ka hatramin'ny Repoblika Demokratika Alemanina.
Tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa dia nopotehin'ny baomba ny tranobe teo amin'ny kianja, ary ny vavahady Brandenburg ihany no nijanona. Taorian'ny fifandonana, natsangana ny rindrin'i Berlin, izay niafara tamin'ny fanimbana ny Pariser Platz ary tamin'ny fotoana nampifanarahana ny Alemanina tamin'ny taona 90 dia nanapa-kevitra ny hanangana ny Paris Square, mba hamorona ensemble maritrano tonga lafatra izay miaraka amin'ny vavahady Brandenburg.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Ny vavahady Brandenburg
Fepetra takiana amin'ny dia avy any Mexico mankany Eropa
Inona no ho hita ao Cuenca